Kitra – «Cosafa U20»: hiady ny medaly alimo amin’i Angola ny Barea | NewsMada
Kitra – «Cosafa U20»: hiady ny medaly alimo amin’i Angola ny Barea
Mbola mitana ny sain’ny rehetra, amin’ity asabotsy ity, ny fiadiana ny amboaran’ny “Cosafa U20”, taranja baolina kitra. Hiady ny laharana fahatelo amin’i Angola ny Barea de Madagascar.
Na tsy hiatrika ny famaranana, amin’ny amboaran’ny “Cosafa U20”, taranja baolina kitra aza, ny Barea de Madagascar, mbola afaka miandrandra tsara ny laharana fahatelo, hiadiana ny medaly alimo. Fihaonana, hikatrohana amin’i Angola, ao amin’ny kianja Nkoloma Stadium, amin’ity asabotsy ity.
Mbola tena hanana ny lanjany tokoa io lalao io satria hiveri-maina izay resy eo. Ekipa tsy mifankahalala mihitsy ny roa tonta fa izao vao hidona. Samy manana ny fahaiza-manaony avy ny andaniny sy ny ankilany. Na izany aza, somary manantombo kely eo amin’ny haben’ny vatana ry zareo Angoley.
Efa miverina ao anatin’ny tanjany ny toe-tsain’ireo mpilalaon’ny Barea, taorian’ny faharesena nahazo azy ireo, nandritra ny lalao manasa-dalana. Vonona ry zalahy ny hanarina iny fahavoazana iny, ary haka ny fandresena hitondrana medaly sy amboara hody an-tanindrazana.
Nahitsy nandritra ny fanazarantena natao, omaly zoma, ireo lesoka hita tamin’iny manasa-dalana iny. Anisan’ny nohamafisina, ny tanjaky ny vatana, teo amin’ireo mpilalao rehetra. Fahavoazana goavana matetika mahazo ny Barea de Madagascar, amin’ny sokajy rehetra, io tsy fahampian’ny vovokaina io. Raha ny zava-misy, manomboka miletsy ny tanjaka eo amin’ny faha-75 mn. Manomboka amin’ny 12 ora sy sasany io lalaon’ny Barea sy ny Angoley io.
Hifandona eo amin’ny famaranana kosa ny Zambianina, mpampiantrano, sy ny Bafana Bafana Afrikanina Tatsimo. Mety hanantombo amin’io lalao io i Zambia, hilalao eo amin’ny kianja filalaovany sy manoloana ireo mpomba azy.